Iskuxirka Iskuxirka iyo Dhismaha Noolaha leh Semalt
Muhiimadda Dhismaha Isku xidhka
Sida aad u Adeegsan Karto Istiraatiijiyad Dhismeedka Brand si Loogu Caawiyo Dhismaha
Baahida loo qabo in la abuuro xiriirro tayo sare leh weligood lagama maarmaan ka dhigin samaynta shabakadaada inaad tahay hay'ad maalkaaga ku sugan. Isku xirnaanta xiriirku dhab ahaantii way sii kordhayaan oo dhib badan maadaama Google uu sii wado cusbooneysiinta xeerarkeeda, waxaana u baahan tahay isku-dar ah habab kala duwan, fikrado, iyo dhaqammo si loo gaaro natiijooyin wanaagsan.
Ka eeg internetka oo idil oo waad garan doontaa in magacyo xoog leh ay xukumaan websaydhka. Sidaa darteed waa muhiim inaad bilowdo inaad u aragto dhismaha iskuxirka inuu yahay aalad muhiim u ah astabashada sumcadda, hadana waqti isku mid ah u arag sumadeynta inay tahay hab lagu caawiyo dhisidda xiriiryo tayo sare leh. Xaqiijinta Tani waxay xitaa dad badan ka dhahday in dhismaha isku xirka uu muhiimad ahaan la mid yahay dhismaha sumadda. Semalt, waxaan ognahay in runtu ay tahay labadan mabda 'oo ay u wada shaqeeyaan gacanta si ay kuu siiyaan guud ahaan guul ganacsi. ¬
Isku xirka dhismaha ayaa ah habka lagu helo ama looga helo boggag iskuxiryo oo ka socda boggaga kale ee internetka kuna yaal bartaada. Xiriir (hyperlink) (oo si fudud loogu yeero isku xire) ayaa ah waddo lagu maro marinka u dhexeeya bogagga internetka.
Mashiinnada raadinta, sida Google, waxay isticmaalaan xiriiriyeyaasha shabakadaha gurguurta - waxay gurguurtaan xiriirada u dhexeeya bogagga kala duwan ee boggaaga, waxayna sidoo kale gurguuranayaan xiriir kasta oo ka dhexeeya websaydhyada shaqsiyeed.
1. Waxay ka caawineysaa kor u qaadista mashiinka raadinta: Waxaa jira labo dariiqo oo aasaasi ah oo Google adeegsato xiriiriyeyaasha. Midda koowaad waa in laga helo bogag cusub bogagga kan labaadna waa in laga caawiyo sidii ay u kala saari lahaayeen bogagga sida ku habboon natiijooyinkooda raadinta.
Markasta oo matoorrada raadinta gurguurtaan bogagga shabakadda, waxay ka soo bixi karaan boggagaas waxyaabaha ay ku jiraan oo ay ku dari karaan tusmooyinkooda. Tani waa sida ay iyagu u go'aamin karaan haddii bog uu buuxiyo shuruudahooda tayada oo uu mudan yahay in si wanaagsan loo buuxiyo ereyada muhiimka ah ee habboon.
Nuxurka boggaaga ayaa ah qodobka kaliya ee go'aaminta ee ku siinaya inaad boos ka hesho Google TOP 100 - Google waxay sidoo kale tixgelinaysaa tirada xiriidhada soo galaya bogga ee su'aal laga keenay websaydhyada kale ee shaqsiyadeed iyo tayada goobahaas dibedda ah. Tani waxay si fudud macnaheedu tahay inaad leedahay fursad sare oo aad ku qiimeyn karto si ka wanaagsan natiijooyinka raadinta maaddaama websaydhyo tayo sare leh oo xiriir la leh kanaga.
In badan oo kuwa wax habeeya ee mashiinka raadinta ah ayaa ku xadgudbay oo si xad dhaaf ah u adeegsaday fikradan; sidaa daraadeed, Google wuxuu bilaabay inuu laalabo cusbooneysiinta xeerarkooda si looga hortago dhaqamadaas. Google xitaa wuxuu ku laayay dhowr websaydh oo si habsami leh u hagaajiyay boggooda internetka ciqaabtii laga baqay Google. Way adag tahay in degel ka soo kabto ciqaabtan oo kale. Sidaa daraadeed, waxaa lagugula talinayaa milkiilayaasha websaydhada inay isticmaalaan fikradda isku xirnaanta si dhexdhexaad ah.
Sidaas si la mid ah xiriiriyaasha tayada sare leh waxay ka faa iidaysan karaan websaydhkaaga iyagoo ku siinaya jagooyin kugu habboon Google TOP, xiriirada tayadoodu hooseyso waxay sidoo kale dhaawici kartaa meeleyntaada TOP. Qaar ka mid ah websaydhyada tartamaya ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan xeelado madow oo SEO ah si ay kuu hoos kuu dhigaan si ay sare ugu kacaan natiijada. Marka, waxaa fiican inaad markasta ka feejignaato inaad iska fogeyso xiriiryadaas. Semalt , had iyo jeer waxaan ilaalinaa macaamiisheenna.
2. Waxay kaa caawinaysaa kor u qaadista taraafikada: Xiriiriyayaashu runti waxay kaa caawinayaan inaad gaarto booskaaga aad ku rabto Google TOP laakiin miyaad ogtahay inay sidoo kale u kaxayn karaan taraafikada boggaaga? Xiriir tayo sare leh oo ka socda websaydhka had iyo jeer la booqdo ayaa taraafikada ugu jiheyn kara boggaaga. Haddiise degelkooda uu yahay mid ku habboon waxa aad bixineysid, waxaa jira suurtagalnimo aad u sarreysa in taraafikada ka timaadda xiriirkooda ay lacag siin doonaan macaamiisha.
Sidaa darteed, isku xirka dhismeyaasha goobaha kale ma aha oo keliya tirada taraafikada ee ay helayaan laakiin waxay ku saabsan tahay sida ay ugu habboon yihiin taraafikadooda wixii aad ku bixin lahayd websaydhkaaga.
3. Waxay kaa caawinaysaa dhisida cilaaqaadka: Marar badan, isku xidhka dhismaha wuxuu ku lug lahaan doonaa gaaritaanka boggaga internetka ee kugu habboon. Waqtiga intiisa badan, waxaad la xiriireysaa dadka ku lugta leh si aad gacan uga geysato kor u qaadida waxyaabaha cusub ee aad abuuray iyo sababta ugu weyn ee jirta ayaa ah inaad kahesho xiriiriye iyaga kaas oo Google ay u tixgelin karto inay tahay sababta ugu wanaagsan ee kuu qiimeyn doonta.
Hadda waxay maareysaa faa'iidooyinka SEO, gaarista dadka saamaynta ku leh warshadahaaga waxay kaa caawin kartaa inaad dhisto xiriir dheer oo aad iyaga la yeelatid taas oo waliba kor u qaadi doonta heerkaaga kalsoonida indhaha macaamiisha wershadahaaga.
4. Waxay kaa caawinaysaa dhismaha sumadda: Marka dhismaha isku xidhka si sax ah loo qabto, waxay kaa caawin kartaa inaad ka dhigto hay'ad wershadeed adoo ka dhigaya astaantaadu inay had iyo jeer u muuqato sidii mid.
Abuurista nuxurka ayaa ah mid ka mid ah farsamooyinka dhismaha ee isku xidhka oo kaa caawin kara inaad tusto macaamiisha mustaqbalkaaga khibradaada, taas oo kaa caawin karta inaad dhisto sumad xoog leh.
Aynu nidhaahno inaad abuureyso qayb ka mid ah waxyaabo aad u fiican iyadoo la adeegsanayo xogta laxiriirta ee laga soo aruuriyay warshadahaaga oo aad ku daabacday khadka tooska ah, fursadaha ayaa ah in caannimadaada warshadahaaga ay kordho. Markaa markii aad la xiriirto dadka kale ee warshadahaaga si aad u hesho xiriiryo, waxaad muujineysaa khibradaada isla mar ahaantaana waxaad u faafineysaa waxyaabahaaga dhageysi ballaaran.
Si la mid ah isku xirka dhismaha ka caawin kara dhismaha sumadda, waxaa sidoo kale jira xeelado dhismeyaal astaan loo adeegsan karo si looga caawiyo dhisidda xiriirro wax ku ool ah. Aynu sahamino farsamooyinka qaar ay astaan-yahannada istaraatiijiyadda u isticmaalaan oo aan aragno sida loogu adeegsan karo isku xirka dhismaha.
1. Asal ahaan, Tayada iyo Jiritaanka Mawduuca iyo Is-dhexgalka: Tayada waxyaabahaaga iyo is-dhexgalkaagu had iyo jeer waxay u sheegi doontaa macaamiishaada mustaqbalka tayada saxda ah ee alaabada ama adeegyada ay tahay inaad bixiso. Had iyo jeer iska hubi inaad marwalba ugu fiican tahay markii aad qashin galeyso ama ka qeybqaadaneyso doodaha websaydhada kale ama baloogyada. Markasta oo aad soo gudbiso waxyaabo joogto ah, asal ah iyo tayo leh, ayaa xoog u yeeleysa aragtidaada suuqa. Markii ay sii korodho awoodda aad yeelato, waxaa sii kordhaya isku xiryada dabiiciga ah ee aad billaabeyso inaad abuurto.
2. Meelaynta Astaan: Xeeladaha istiraatiijiyaduhu waligood iska indho tirayaan beegsiga dhagaystayaasha saxda ah. Sidaa si la mid ah, tayada farriinta astaantaada astaanta ayaa sidoo kale muhiim u ah bartilmaameedsashada websaydhyada saxda ah iyo daabacaadaha.
Mar kasta oo aad ku jirtid olole iibsi isku-xir, markasta isweydii naftaada haddii istaraatiijiyaddu u qaadi doonto astaantaada booska gaarka ah ee aad rabto in ay ku dhigato suuqa bartilmaameedka.
Soosaarkaaga qiimaha gaarka ah ee magacaagu waa inuu had iyo jeer meel ku yeeshaa dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay iyo is-dhexgalkaaga khadka tooska ah. Waa inaad u isticmaashaa xiriiriyeyaal sidii buundooyin loogu talo galay dadka xiiseynaya waxa astaantaadu bixiso. Sidaa darteed, ka hel xiriiriyeyaal websaydhada leh dhagaystayaashaada una fududee inay kuu helaan.
Furaha helitaanka xiriiriyeyaasha wanaajinaya aragtida astaanta iyo kobcinta mashiinka raadinta ayaa ah helitaanka farriimo sumad-saar ah oo tayo leh bogagga shabakadaha maamulka leh.
3. Abuuritaanka cilaaqaadka: Marti qaadista asxaabta warshadaha inay ku soo kordhiyaan waxyaabaha ka kooban websaydhkaaga isla markaana wax u qabashada iyaga sidoo kale waa istiraatiijiyad ganacsi oo aad u xoog badan oo kaa caawin kara inaad dhisto xiriiriyeyaasha. Xiriirka aad la leedahay noocyada kale ee lagu kalsoonaan karo ee ka jira wershadahaaga ayaa kaa caawin doona inaad u muuqato mid si kalsooni leh oo aamin ah.
Sida ugufiican ee lagu muujiyo ururadaada waa maadooyinka aad u gudbiso dhagaystayaashaada. Marka, waxaa muhiim ah inaad weydiiso asxaabtaada inay marti ku qoraan bogaggaaga, tusaale ahaan.
Waxa kale oo aad weydiisan kartaa inaad dib ugu daabacdo qaar ka mid ah waxyaabaha duug ah (taas oo laxiriirta dhagaystayaashaada) bartaada - oo dabcan, waxaad fursad siin kartaa asxaabtaada isla fursad ay dib ugu daabacaan nuxurkaagii hore.
Mid ka mid ah faa iidooyinka istaraatiijiyad guuleysiga ayaa ah in ay xoojiso kalsoonida guud iyo qoraaga faylalka ee shabakadaha. Faa'iido kale oo ay tahay in laga fiirsado ayaa ah maadaama maaddadu ay ku fidin doonto shabakadaha labada dhinacba, labadooduba waxay heli doonaan xiriiro dabiici ah iyo macaamiil / akhristayaal cusub. Noocaagu wuxuu ku sii xoog badanayaa indhaha soo booqdayaashaada cusub markay arkaan wada shaqeynta ka dhaxaysa adiga iyo noocyada kale ee la aaminay.
4. Sheeko-sheeko: Tani waa mid ka mid ah fikradaha ugu awoodda badan sumeeynta. Dhamaan magacyada waaweyn waxay leeyihiin sheekooyin waa weeyn oo kuxiran magacyadooda bina aadamka weyna adagyihiin inay laxiriiraan sheekooyinka.
Haddii aad leedahay sheeko weyn oo joogto ah, waxay kuu fududayn doontaa inaad si dabiici ah ugu dariso xiriiriyeyaal iyo fure-fureyaal farriintaada tanina waxay kaa caawin doontaa inaad ku guuleysato jagooyinka aad higsaneyso Google TOP.
5. Abuuritaanka danjirayaal sumad leh: Dadku waxay aad ugu jecel yihiin inay aaminaan bini-aadanka kale inta ay iyadu astaan u tahay. Baro sida aad wax u yeeleyso astaantaada adoo siinaya wajigeeda.
Samee shakhsiyaad noqon doona calanka qaada astaanta astaantaada internetka oo dhan. Waxay ka caawin doonaan inay ka sheekeeyaan sheekadaada, dhisaan wacyigelinta iyo xoojinta aragtidaada sumcadda qaab muuqata oo dadaal la'aan ah. Safiiradan sumadda leh waxay abuuri doonaan xiriiriye abuuri doona gaadiid badan oo goobtaada tagaya sidoo kalena hagaajin doona qiimeyntaada Google TOP.
Dhismaha isku xidhka ayaa kaa caawin kara inaad abuurto astaan adag iyo dhisme sumad ayaa waliba loo isticmaali karaa inuu kaa caawiyo inaad dhisto xiriiryo tayo sare leh. Dhismaha isku xidhka iyo dhismaha sumadda ayaa si xoogan isugu xidhan oo fikradahoodu had iyo jeer isku soo xadgudbaan. Kama dhisi kartaan sumc sumeysan kara khadka tooska ah adoo aan ku xidhnayn isku xirka dhismaha iyo dhinaca kale. Semalt wuxuu leeyahay aaladda ugu fiican warshadaha si ay kaaga caawiyaan labada isku xirka dhismaha iyo astaanta dhismaha guud ahaan guusha ganacsigaaga.